China Hydraulic booster cylinder emepụta na ndị na-ebu ya | Vishi
Hydraulic cylinder bụ ihe na-eme ka mmiri na-arụ ọrụ nke na-agbanwe ike hydraulic n'ime ike igwe ma na-emegharị mmegharị (ma ọ bụ oscillating motion) na usoro ziri ezi. Ọ dị mfe na nhazi ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya na ọrụ. enwere ike wepu ngwaọrụ, ọ nweghịkwa nnyefe nnyefe, mmegharị ahụ kwụsiri ike, ya mere a na-ejikarị ya rụọ ọrụ ụdị hydraulic niile.
Ike mmepụta nke haịdrọlik na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị na mpaghara dị irè nke piston ahụ na nrụgide dị n'akụkụ abụọ ahụ.Haịlịlịnda a na-arụ ọrụ bụ nke mejupụtara gbọmgbọm na isi cylinder, piston na piston, akàrà akụrụngwa, akụrụngwa na ngwaọrụ na-ekpochapu. .Buffering ngwaọrụ na iyuzucha ngwaọrụ na-adabere na ụfọdụ ngwa; ngwaọrụ ndị ọzọ dị mkpa.
Hydraulic draịva nwere cylinders na moto nke na-agbanwe ike nrụgide nke mmiri mmiri n'ime ike ọrụ ma mepụta ya. Cylinder bụ tumadi mmepụta linear ngagharị na ike.
Hydraulic cylinder nwere ụdị dị iche iche, dịka njirimara dị iche iche nke usoro ya enwere ike kewaa ya n'ụdị piston, ụdị plunger na ụdị swing ụdị atọ, dịka ọnọdụ nke omume ọ nwere ike kewaa n'ime otu ọrụ na arụ ọrụ abụọ.
Piston cylinder, plunger cylinder bụ nke a na-ejikarị eme ihe: igwe, dịka excavator; Nnyocha sayensị, dị ka ụlọ nyocha ụlọ akwụkwọ mahadum.
Osimiri hydraulic oscillating bụ onye na-eme ihe ike nke nwere ike ịmịpụta torque ma ghọta mmeghari ntụgharị. Ọ nwere ọtụtụ ụdị dị ka otu vane, vane abụọ na gburugburu oscillation.Blade mode: na stator ngọngọ bụ ofu na cylinder ngọngọ, na agụba na-ejikọrọ na rotor. Dị ka ntụziaka nke oriri mmanụ, UM UBARA ga-ebugharị A na-ekewa ụdị swịl na-agba gburugburu na-agba ọsọ na helix abụọ dị iche iche, ugbu a a na-ejikarị helix okpukpu abụọ eme ihe, site na piston abụọ dị n'akụkụ hydraulic cylinder kwụ ọtọ na-agagharị na ntụgharị usoro ntụgharị. , iji mezuo ngagharị ngagharị.
N'ime sistemụ hydraulic, iji hydraulic cylinder na-ebugharị usoro yana oke oke, mgbe hydraulic cylinder na-agagharị na njedebe nke ọrịa strok nwere ume dị ukwuu karị, dịka ịghara ịhapụ ọrụ, piston na isi cylinder ahụ ga-eme Iji mebie ma gbochie omume nke ụdị mmerụ ahụ, ya mere enwere ike ịtọlite ​​ya na mpempe mmiri hydraulic ma ọ bụ melite na nchekwa nchekwa.
Nke gara aga: Igwe ọkụ ọkụ YZU
Osote: Gas-mmiri mmiri booster cylinder